China CNC rụpụta CNC Pipe Cutter 5 Axis 3D CNC Plasma Cutting Machine maka metal
APEX Brand 5 axis pipe plasma ọnwụ igwea na-ejikarị egbutu ọkpọkọ gburugburu, ọkpọkọ square, na ọkpọkọ akụkụ anọ.
Ọ nwere ike ibelata eserese dị mgbagwoju anya dị ka oghere ọkpọkọ, oghere, na obere akụkụ akụkụ.
Ogologo oge ịkpụ bụ mita 6, mita 9, na mita 12.Nkwado nhazi
5 × 10 Hypertherm Plasma Cutter maka Mpempe akwụkwọ Metal na Metal Pipe
1.plasma ọnwụ igwe eji Welded lathe bed nke oké profiled ígwè, ọzọ siri ike ma kwụsie ike.
2. Nkwado FASTCAM nesting software dị ka ọkọlọtọ G koodu ụzọ faịlụ nwekwara ike ịgụ site software mgbanwe software dị ka AUTOCAD eme DXF,DWG formats.U disk mgbanwe njikwa usoro nhazi faịlụ, mfe iji rụọ ọrụ.
Ọrịre na-ekpo ọkụ 2021 kacha mma 1530 CNC Plasma ịkpụcha igwe
ire ọkụ nnukwu Gantry Industrial Plasma Cutting Machine
1) The doo na-eji ìhè structural imewe, na ezi rigidity Ọdịdị, fechaa nwụrụ anwụ na smallmovement inertia.
2) .The gantry Ọdịdị, Y axis eji dual-motor dual-driven system, X, Y, Z axis niile na-eji dual-straightrail na-eme ka igwe na-akwọ ụgbọala were were na elu-nkenke.
Dozie kpam kpam ụzọ nhazi akwụkwọ ntuziaka ọdịnala.Melite arụmọrụ nke ọtụtụ oge.
Ahịa na ọnụ ahịa dị ọnụ ala High Power Fiber Laser Metal Cutting Machine
Fiber Laser Cutting Machine maka Metal Sheet, Tube and Pipe
1530 Fiber Laser Metal Pipe Cutting Machine maka ọrịre
2021 Kachasị mma Fiber Laser Machine maka igwe
Hot ire ere Jinan ozugbo Fiber Laser Metal Cutting Machine
Igwe na-egbutu Fiber Laser dị ọnụ ahịa maka Tubes metal na ọkpọkọ ọla